Madaxweynaha Somaliland oo si kulul uga hadlay dagaaladii Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madaxweynaha Somaliland oo si kulul uga hadlay dagaaladii Muqdisho
Madaxweynaha Somaliland oo si kulul uga hadlay dagaaladii Muqdisho
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera ee Xarunta Gobolka Saaxil, ayaa si kulul uga hadlay dagaaladii ka dhacay Magaalada Muqdisho ee u dhexeeyay dowladda iyo Mucaaradka.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa Madaxda dowladda Federaalka ku eedeeyay inay dhibaato ku hayaan shacabka kunool Muqdisho, ayna barakiciyeen, islamarkaana ay qaddarin iyo ixtiraam badan u hayaan shacabka Caasimadda.
Waxaa uu sheegay Madaxweynaha Somaliland ay arrimo siyaasadeed isku hayaan Madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta diiddan qarannimada Somaliland, ayna ka xun yihiin dhibaatada loo geysanayo Bulshada.
“Dawladdaas Xamar ka dhisani dhibaatada ay u geysatay dadka xamar jooga iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baannu uga damqanaynaa, Soomaaliya maamulka dadka hoggaamiya iyo siyaasiyiinta tallo xumadoodaannu is haynnaaye Shacabka walaalahayaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno, haddaannu haynona waa u gurman lahayn, markay dhibaato dhacdona waannu u gurmannaa” ayuu yiri Muuse Biixi.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Somaliland ayaa farriin u diray shacabka kunool Magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in dhibaatada ay xanuunkeeda Afarta sanno ku dareemeen ay Somaliland soddonkiisa sanno ee ugu dambeeyeyba u dulqaadanaysay.
Maqaal horeFaah faahin dheraad ah ayaa kaso baxaya Khasaaro ka dhashay Qarax lagu weeraray Xarunta Taliska Asluubta ee Muqdisho
Maqaal XigaIGAD oo War kasoo saartay Go’aankii Madaxda Maamul Goboleedyada